Teko Korede Bello Maka Abụọ Ma Na Ndị Ọzọ Na Na Na Na Naa 2020
New music Friday bụ ebe a ma ọ bịara na ọtụtụ egwu egwu tọhapụrụ ụfọdụ ndị egwu anyị kachasị amasị na Nigeria na n'ofè. Anyị hụkwara ụfọdụ ndị A-List Nigerian nka na-egosi na abụ site n’aka ndị si mba ọzọ. Egwu oma ndi nigeria.
Dị ka oge niile, anyị curated zuru ezu playlist jupụtara rave-kwesịrị boro ka ije ka izu ụka niile. Egwu oma ndi nigeria.
Lelee abụ kachasị atọ kachasị wepụta n'izu a…
1. Korede Bello - Tebụlụ maka mmadụ abụọ
Mavin Records ọbụ abụ na onye edemede - Korede Bello emechaala wepụta EP ọhụrụ ya Isiokwu nke Abụọ. Korede Bello onye ama ama dika ndi gbara ama egwu dika Godwin kpughere oru ngo a nke oge ise, nkeji iri na ise nke na-enweghị atụmatụ. Na EP bụ tebụl usoro egwu maka abụọ nke bụ abụ dị nro, Afro pop nke na-eme ka ụda Afro bụrụ isi ya.
Off Smoke si mẹ ndu ozi; Gbaa Star naa, Ebumnuche maka ọnwa (Dieluxe), Pop Smoke bọọlụ na onye ọbụ abụ Naịjirịa na onye isi DMW Davido iji nyefe akara ohuru ohuru a aha mbufịt. Daviddị Davido nke Afro fusion na egwu mere ka ọ bụrụ abụ. Egwu oma ndi nigeria.
3. DyL na-ere ọkụ - Eli
na Nwanyi New York ka na -eme ka ebili mmiri, Ọkụ DML nke YBNL wepụtara abụ ọhụrụ akpọrọ Eli. Abụ a bụ Eli bụ Fireboy nke abụọ n'ime oge izu anọ, ikekwe na-egosi ike mwepụta nke ọrụ ọhụụ na 2020. Pheelz Mepụta usoro egosipụtara anyị akụkụ dị iche nke Fireboy nke anyị enwetụbeghị mbụ ka o gosipụtara n'ụzọ zuru oke Aftobeats na dancehall.
4. Kida Kudz ft Falz na Joey B - Buga
Onye na-ahụ maka ndị Naijiria raketị UK Kida Kudz weputara akara ohuru ohuru eji aha, Buga egosi Falz na onye rapa nke Ghana, Joey B. Buga na-abịa mgbe Kida wepụchara usoro egwu ọkụ na ọnwa gara aga, gụnyere Blaqbonez gosipụtara nkwonkwo a kpokọtara Nọgide Jiggy.
Vault Records na-agụ egwú na songwriter Selebobo chịkọtara onyeisi Cartel Music, Tekno na abù ọzọ akpọrọ Dai Dia. Ukwe a na-akpọ hip Afrobeat Dai Dia gbanyụrụ Selebobo ọhụụ ewepụtara Bobo Of Africa EP. Selebobo na Tekno arụkọala ọrụ ọnụ na nke a, ọ ga-abụ nke ọzọ.
6. Pop Smoke ft Burna Nwa - Nwee obi uto
American rapper na onye na-ede abụ Pop Smoke na otu chi Afrofusion Nigeria Nwa nwa nwa Haziri ukwe a Hip-pop tupu ọnwụ Pop Anwụrụ ọkụ na Febụwarị 2020. Nke a bụ ụdị nke abụọ a, ya na nke na-egosi abụ Latinx pop, Karol G. Nwee obi uto na-agwa mmadụ niile ka ha nụ ụtọ onwe anyị dịka anyị na-ebi naanị otu mgbe. Egwu oma ndi nigeria.
Ebe E Si Nweta Foto: Instagram | Koredebello
afiri wɔ hɔ Abụ Afrịka Nwa nwa nwa Davido umuigbo ndi nigerian nigerian Kida Kudzw Korede bello new nigerian songs pop Anwụrụ ọkụ egwu na Nigeria
Yemi Alade Na-enweta Ezi Ahụ Ike Na Ezi +hụnanya + More Abụ Ọhụrụ Iji Mepee endbọchị Izu ụka